NAD + Da'da: Doorka The (NR) Nicotinamide Riboside Chloride Xaqiiqda Ka-hortagga gabowga
Nicotinamide riboside (NR) iyo nicotinamide riboside (Chloride)
Daawada loo yaqaan 'Nicotinamide riboside' (NR) chloride waa nooc kaloriin ah oo loo yaqaan 'nicotinamide riboside' (NR).
1.Waa maxay Nicotinamide Riboside (NR)?
NR waa nooc ka mid ah fiitamiin B3 ama niacin. Xarunta waxaa la ogaadey 1940-kii sidii cunsur koritaan loogu talagalay H. hargab. Bilowga 21st qarnigii, dhibco badan oo daraasado ah ayaa cadeynaya in NR uu yahay horudhaca NAD +. Jirka bini'aadamka, nafaqadan waxay yareyneysaa heerarka kalastarolka, waxay yareynaysaa halista cudurada wadnaha iyo xididada, waxay sare u qaadeysaa howlaha maskaxda, waxayna yareyneysaa arthritis-ka.
Nicotinamide riboside (NR) waa pyridine-nucleoside, oo u adeegta sidii horudhac u ah NAD + (Nicotinamide adenine dinucleotide). NAD + waxay shidaal siisaa inta badan shaqooyinka bayoolojiga oo ay kujiraan dayactirka DNA, dhalinta tamarta gacanta, dejinta laxanka wareega jirka, iyo inbadan. Nasiib darrose, maaddooyinkan ayaa si dabiici ah hoos ugu dhaca iyada oo loo dareemayo gabow.
2.Waa maxay Nicotinamide Riboside (NR) Chloride?
Nicotinamide Riboside (NR) chloride (NIAGEN) waa nooc ka mid ah NR iyo koloriin. Xaruntu waxay kordhisaa heerarka NAD + waxayna kicisaa SIRT1 iyo SIRT3. Waxay dib uga noqotaa gabowga iyadoo kor u qaadeysa dheef-shiid kiimikaadka oksaydhka iyo ka-hortagga cudurrada dheef-shiid kiimikaadka ee la xiriira cuntada.
Maraykanka, nikotinamide riboside chloride guud ahaan waxaa loo aqoonsan yahay inuu yahay ammaan. Sidaa darteed, waa qayb ka mid ah cuntada la oggolaaday ee loogu talagalay isticmaalka borotiinka ruxruxa, biyaha fiitamiinka, ciridka, iyo wixii la halmaala supplements.
Bini'aadamnimadu waxay ka hortageysay gabowga iyagoo bartilmaameedsanaya maqaarka. Mar uun, waa inaad qaar soo martay anti-gabowga kareemada lagu nadiifiyo duuduubka wajiga qoto dheer, maqaarka oo dhacaya, iyo uurka. Si kastaba ha noqotee, daaweyntani waa qalad iyo muddo-gaaban. Habka dammaanad-qaadka ah ee gabowga nimcadiisa waa iyada oo la dejiyo isbeddelada nafleyda ee ka dambeeya da'da iyo la macaamilka sababaha asalka ah.
Cilmi-baarayaashu waxay tan iyo markii ay aasaaseen xiriirka ka dhexeeya heerarka NAD + hooseeya iyo cudurada la xiriira da'da. Daahfurkaan xagjirka ah wuxuu ahaa midda cabiran ee baaxadda caafimaadka iyadoo la kordhinayo suurtagalnimada ka noqoshada geedi socodka gabowga Sababtaas awgeed, budada nicotinamide riboside chloride ayaa soo maray marinnada shaybaarada cilmi baarista sababo la xiriira waxtarka ay u leexisay saacadda noolaha.
Qeexitaanka Kiimikada ee Nicotinamide Riboside (Chloride) Powder
Heer kuleyl -20 ° C Talaajo
Ogaanshaha Faa'iidooyinka Nicotinamide riboside (NR), maxay yihiin faa'iidooyinka Nicotinamide Riboside Chloride?
Faa'iidooyinka loo yaqaan 'nicotinamide riboside chloride' iyo 'nicotinamide riboside' waa isku mid tan iyo markii ay labadooduba ka shaqeeyaan sidii loo kicin lahaa borotiinka NAD iyo sirtuin 1.
Dheef-shiid kiimikaad caafimaad leh oo lagu maareeyo cayilka
Tiro badan oo cilmi-baaris ah ayaa caddeeyay waxtarka kiimikada 'nicotinamide riboside chloride' ee yareynta miisaanka. Isticmaalayaasha way waayi karaan ilaa 10% dufankooda iyaga oo aan lahayn xakamaynta cunnada ama tababar jidheed.
Qaadashada daroogadu waxay ka caawisaa hoos u dhigida LDL kolestaroolka iyadoo kor loo qaadayo heerarka kolestaroolka wanaagsan. Tani waxay dhacdaa markay dib u celiso ficil-celinta enzymes-ka masuulka ka ah isku-darka triglycerides. Sidaa awgeed, soosaarka lipoproteins-ka cufnaanta yar ayaa gaabisa.
Daawada 'Nicotinamide riboside chloride' waxay waxtar u leedahay bukaanada miisaanka culus ee qaba cudurka macaanka. Dheeraadku wuxuu kobciyaa dheef-shiid kiimikaadka isagoo hagaajiya dulqaad la'aanta gulukooska
Marka heerarka NAD ay ka hooseeyaan sida ugu fiican, nidaamkaaga neerfaha iyo caafimaadkaaga garashada ayaa qatar ku imaan kara. Qaado, tusaale ahaan, bukaanada qaba cudurka Alzheimers waxay muujiyaan feejignaan hoose oo NAD + iyo cillad mitochondria.
Waxaa ka mid ah daawada loo yaqaan 'nicotinamide riboside chloride', isticmaalka maareynta neerfayaasha ee gabowga liiska. Daroogadu waxay wax ka qabataa dhaawaca intracerebral, istaroogga ischemic, bararka neerfaha, iyo dhimashada neerfaha.
Mid ka mid ah furayaasha loo yaqaan 'Nicotinamide riboside chloride' ayaa la adeegsadaa waxaa ka mid ah dhiirrigelinta caafimaad gabow. Xaruntu waxay horseeddaa kororka wax soo saarka NAD, oo door muhiim ah ka ciyaara unugyada. Tusaale ahaan, waxay sare u qaaddaa heerarka tamarta gacanta ee muruqyada, beerka, iyo kelyaha. Ka sokow, Nicotinamide riboside chloride waxay ka hortagtaa da'da iyadoo kordhinaysa wareegga dhiigga ee xubnahan muhiimka ah.
Nicotinamide riboside chloride waxay faa'iido u leedahay qurxinta hidaha iyadoo la dayactirayo DNA duug ah oo waxyeello gaadhay. Haddii isku-darka NAD uu dhaco, deoxyribonucleic acid dhaawacmay ayaa laga yaabaa inuu kiciyo noocyada oksijiinta ee falcelinta leh, taasoo horseedaya walbahaarka oksida, iyo u nuglaanshaha kansarka.
Sidee Nicotinamide Riboside Chloride ugu noqon kartaa Gabowga?
Inta lagu jiro da'da, jirku wuxuu la kulmaa xoogaa isbeddelo jireed ah sida shaqooyinka gacanta ay dib ugu noqdaan. Tusaale ahaan, jidhku wuxuu baabi'iyaa NAD + iyo borotiinnada SIRT1 intay soo saari karto. Heerarka hoose ee coenzymes-kan ayaa dardargeliya da'da halka ay ka dhalanayaan cudurada la xiriira da'da ee ay ka mid yihiin sonkorowga, cudurada wadnaha iyo buurnida.
Maamulka nicotinamide riboside chloride faa iidada u leh habka difaaca jirka adoo kor u qaadaya xididdada dhiigga, sida lymphocytes iyo leucocytes. Xaruntu waxay kor u qaadaysaa isku-darka NAD +, markaa, waxay kordhineysaa heerarka borotiinka SIRT1. Sidaa awgeed, SIRT1 waxay hoos u dhigtaa gabowga xididdada iyadoo kordhinaysa socodka dhiigga ee muruqyada lafaha, nidaamka wadnaha, iyo unugyada neerfaha.
Ka sokow, nicotinamide riboside chloride supplement gabowga ka rogaa adoo soo saaraya NAD + dheeraad ah si looga caawiyo dayactirka DNA ee gudaha unugyada gacanta. Saameyntani waxay ka hortageysaa walbahaarka oksida
Cilmi-baarista la heli karo waxay sidoo kale xaqiijineysaa in nicotinamide riboside chloride ay ka hortageyso cufnaanta lafaha, hoos u dhaca wax soo saarka ilmada, iyo sanduuqa 'hypopigmentation'. Dhamaan xaaladahaani waa kuwa ku faafa dadka waayeelka ah.
Waxaa jira in ka badan shan NAD + hore u socod laakiin hadda, waxaan u weecin karnaa diiradeena nicotinamide riboside chloride vs nicotinamide mononucleotide (NMN).
Labadan isku-darka waxay kordhiyaan heerarka NAD + ee jirka si loo hagaajiyo shaqooyinka gacanta oo loo yareeyo dareenka.
Maxaa labadan kala sheegaya ayaa ah in NMN aysan ahayn qaab fiitamiin B3 ah. Kiimikadu kuma dhex dhex gasho unugga illaa ay u beddelayso nicotinamide riboside. Sababta ayaa ah in cabirkeeda molikiyuulka uu ka weyn yahay kan budada nicotinamide riboside chloride. Hantidan awgeed, helitaanka helitaanka NMN iyo rajada laga qabo in la dhaqaajiyo heerarka NAD + waxay laf dhabar u ahayd aagga cilmi baarista.
Sida laga soo xigtay Dr. Sinclair, oo ah khabiir ku takhasusay hidde-wadaha Jaamacadda Harvard, waxtarka NMN waa mid aan la mid ahayn. Wuxuu qiranayaa inuu adeegsaday tan dhamaystirid, taas oo ka dhigaysa inuu dareemo da 'yar iyo inuu soo noolaaday. Sinclair wuxuu u dhigmaa waxtarka NMN inuu ku ordo treadmill. Saynisyahanku wuxuu xusay inay wanaajiso wareegga dhiigga, waxay dhiirrigelisaa adkeysiga murqaha, iyo dheef-shiid kiimikaad wax ku ool ah.
Taa bedelkeeda, Nicotinamide riboside chloride waxaa toos u qaata unugga. Molikuyuulku waa fiitamiin B3 kale. Waxay ku kordhin doontaa heerarka NAD + in ka badan 60% jirka aadanaha. Si ka duwan inta badan NAD horudhac ah, Kuwaas oo kujira liiska daawashada FDA, nicotinamide riboside (NR) chloride waxay kujirtaa liiska liiska cuntada ee GRAS (Guud ahaan Loo Aqoonsaday Badbaad ahaan).
Maxaad toos ugu qaadan weyday budada NAD? Nicotinamide Riboside Chloride vs Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD)
Maaddaama diiraddeennu ay ku saabsan tahay sare u qaadista NAD ee jirka, waxaad u maleyneysaa inaad su'aal ka taagan tahay sababta buuqa ka dhasha nicotinamide riboside chloride. Sow maahan inaad maamusho nad si toos ah nidaamkaaga halkii aad uga mari laheyd dhibaatada ah adeegsiga dhexdhexaadinta sida NIAGEN, NR, ama NMN? Hagaag, ii oggolow inaan wax kooban kaa siiyo nicotinamide riboside chloride vs nicotinamide adenine dinucleotide.
Sababta ugu weyn ee aadan marnaba u qaadan karin NAD si toos ah ayaa ah in biomarker-ku uu unoqon karo unug unug.
Ku darista isticmaalka nicotinamide riboside chloride vs nicotinamide adenine dinucleotide ayaa ah in tii hore ay aad ugu gudbi karto xuubka plasmic-ka. Qiyaasta nuugistu waxay si aad ah uga sarreysaa nidaamka dheef-shiidka, marinka dhiigga, iyo ugu dambeyn maskaxda.
Nicotinamide riboside (NR) Qiyaasta Kolorayda: Sidee loo Isticmaalaa?
Sannadkii 2016, nicotinamide riboside chloride supplement wuxuu ku guuleystay xaaladda GRAS. Sannad ka hor, FDA waxay u ansixisay inay tahay isha laga helo niacin iyo qayb ka mid ah cuntada maalin kasta oo qaadasho dhan 180mg.
Waqtigan xaadirka ah, heerarka ugu badan ee shatiga nicotinamide riboside chloride ee 300mg maalintii. Si kastaba ha noqotee, tijaabooyinka aadanaha qaarkood, maadooyinka waxay nuugi doonaan illaa 2000mg ee daroogada. Waa inaad ogaataa in ka badan qiyaasta 500mg ay u badan tahay inay u horseedi doonto waxyeelo riboside oo nikotiinamide ah.
Qiyaasta niacin kaliya ayaa lagu dabaqayaa caafimaad dadka waaweyn, oo ay ku jiraan haweenka uurka leh iyo hooyooyinka nuujinaya.
Nicotinamide Riboside Chloride Side Raadka: Ma Ammaanbaa in la isticmaalo Nicotinamide Riboside Chloride Supplement?
Budada 'Nicotinamide riboside chloride' waa mid amaan ah waxayna haysaa xaalada aadka loo jecel yahay ee walxaha GRAS. Xaqiiqadani macnaheedu maahan in xarunta aysan laheyn wax calaamado xun ah. Si kastaba ha noqotee, biyuhu waa nolol laakiin sidoo kale waxay soo jiitaan xoogaa diidmo ah markaad ku xadgudubto. Si looga hortago dhibaatooyinka soo raaca, hubi in qiyaastaada 'Nicotinamide riboside chloride' ay ugu hooseyso sida ugu macquulsan.
Qaar ka mid ah fal-celinta xun waxaa ka mid ah;
Dareen-celinta maqaarka sida finan iyo nabarro kordhay
Marka laga soo tago dhibaatooyinka soo raaca 'nicotinamide riboside chloride' ee kor ku xusan, sidoo kale waxaad u badan tahay inaad la kulanto miisaanka oo yaraada. Si kastaba ha noqotee, natiijadani waa duco qarsoodi ah gaar ahaan haddii aad cayillan tahay, cayillan tahay, ama aad isku dayeyso inaad miisaankaaga ilaaliso.
Halkee laga Iibsadaa (NR) Nicotinamide Riboside Chloride in Bulk?
Waxaad samayn kartaa nicotinamide riboside chloride ka iibso dukaanka internetka. Haddii aad rabto budada heerka dawooyinka ee badan ama qaar ka mid ah kaabayaasha cuntada, hubi inaad fiiriso alaab-qeybiyaha dhabta ah. Ku darista dukaamaysiga dalwaddu waa inaad isbarbar dhigi karto qiimaha oo aad fiirin kartaa jawaab celinta waqtiga dhabta ah ee macaamiisha. Si kastaba ha noqotee, waxaad sidoo kale u badan tahay inaad ku dhacdo been abuur.
Waxaan nahay sumcad lagu kalsoon yahay oo alaabadayada oo dhami ay u hoggaansamaan tallaabooyinka xakamaynta tayada. Waxaan la macaamilnaa kiimikooyin kala duwan iyo supplements cuntada. Nagala soo xiriir amarkaaga iyo oraah saaxiibtinimo.
Conze, D., Brenner, C., & Kruger, CL (2019). Badbaadada iyo Dheef-shiid kiimikaadka Muddada-dheer ee NIAGEN (Nicotinamide Riboside Chloride) oo lagu sameeyay Randomized, Double-Blind, Tilmaamaha Caafimaadka ee Goobta-Lagu Xakameynayo Dadka Waaweyn. Warbixinnada Cilmi-baarista.
Bogan, KL & Brenner, C. (2008). Nicotinic Acid, Nicotinamide, iyo Nicotinamide Riboside: Qiimaynta Molecular ee NAD + Fiitamiinnada horudhaca ah ee Nafaqada Aadanaha. Dib-u-eegista Sanadlaha ah ee Nafaqada.
Mehmel, M., Jovanovic, N., & Spitz, U. (2020). Nicotinamide Riboside - Xaaladda Hadda ee Cilmi-baarista iyo Isticmaalka Daaweynta.
Turck, D., Castenimiller, J., iyo al. (2019). Badbaadada Nicotinamide Riboside Chloride oo ah Novel Cuntada oo raaceysa Regulation (EU) 2015/2283 iyo Bioavailability of Nicotinamide oo laga soo xigtay ilahaan, iyadoo la tixraacayo dardaaranka 2002/46 / EC. Joornaalka EFSA.
Elhassan, YS et al. (2019). Nicotinamide Riboside waxay sii kordhineysaa Murqaha Qalfoofka Aadanaha ee Da'da ah NAD + Metabolome waxayna soo jiitaan Saxeexyada Transcriptomic iyo Anti-inflammatory Warbixinta unugyada
Aman, Y., Qiu, Y., Tao, J., & Fang, EF (2018). Awoodda Daaweynta ee Kordhinta NAD + ee Gabowga iyo Cudurada La Xiriira Da '. Daawada Tarjumida ee Gabowga.
RAW NICOTINAMIDE MONONUCLEOTIDE (NMN) AAWAY (1094-61-7)
1.Nicotinamide riboside (NR) iyo nicotinamide riboside (Chloride)
3.Si aad u ogaatid Faa'iidooyinka Nicotinamide riboside (NR), maxay yihiin faa'iidooyinka Nicotinamide Riboside Chloride?
4.Sidee Nicotinamide Riboside Chloride ugulaaban kartaa Gabowga?
6.Waa maxay sababta aan toos u qaadan budada NAD? Nicotinamide Riboside Chloride vs Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD)
7.Nicotinamide riboside (NR) Qiyaasta Kolorayda: Sidee loo Isticmaalaa?
8.Nicotinamide Riboside Chloride Side Raadka: Ma Ammaanbaa in la isticmaalo Nicotinamide Riboside Chloride Supplement?
9.Halkee laga Iibsadaa (NR) Nicotinamide Riboside Chloride ee Jumlada?